Waxkabaro xidigo faransiis ah oo premier league ka dhaliyeen goolasha ugu badan. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Waxkabaro xidigo faransiis ah oo premier league ka dhaliyeen goolasha ugu...
Waxkabaro xidigo faransiis ah oo premier league ka dhaliyeen goolasha ugu badan.
Waxaan warbixintaan ku soo qaadneynaa xidigaha dhaliyeen goolasha ugu badan taariiqda horyaalka premier league marka laga hadlo xidigaha kaoso jeeda wadanka faransiiska.
Xidigaha u dhashay wadanka faransiiska ee kasoo xamaashay horyaalka ingiriiska ayaa aad u badan iyadoo kuwa qaar ay ku fashilmeen halka sidoo kale ay jiraan xidiga rikoor ka dhigay xaga gool dhalinta.
Xidiga koobaad waa xidigii hore kooxda arsenal kana soo jeeday wadanka Farance waana 🇫🇷 Thierry Henry oo dhaliyey 175 gool xidiga labaad waa xidigii wadanka France iyo kooxdii chelsea 🇫🇷 Nicolas Anelka oo dhaliyey 125 gool xidiga sedexaad ee booska xalay soo galay waa xidiga hada u ciyaara chelsea ee 🇫🇷 Olivier Giroud oo dhaliyey 90 gool xidiga afaraad waa 🇫🇷 Louis Saha oo dhaliyey 85 gool
Xidiga ugu dambeeya waa 🇫🇷 Eric Cantona oo united u dhaliyey 70 gool.
Giroud is chasing a century. https://t.co/cgknkKhpRy
Previous articleTababaraha RB Leipzig Julian Nagelsmann oo ka hadlay ciyaarta liverpool.
Next articleMason Greenwood oo heshiis cusub la galay man united.